नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : डा. केसीलाई सत्याग्रहमै मरोस भन्ने चाहन्छन मर्सीबादीहरु, मार्सीभातका दासहरु डा. केसी बिरुद्ध नाङ्गो रुपमा प्रस्तुत, अरु सबै वहाँको पक्षमा !
डा. केसीलाई सत्याग्रहमै मरोस भन्ने चाहन्छन मर्सीबादीहरु, मार्सीभातका दासहरु डा. केसी बिरुद्ध नाङ्गो रुपमा प्रस्तुत, अरु सबै वहाँको पक्षमा !